Somaliland oo dacwad ka gudbisay Idaacadda VOA | Berberanews.com
Home WARARKA Somaliland oo dacwad ka gudbisay Idaacadda VOA
Somaliland oo dacwad ka gudbisay Idaacadda VOA
Hargeysa(Berberanews)- Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waraaq dacwad ah ka gudbisay laanta AfSoomaaliga ee Idaacadda VOA ,sida ay baahisay Wakaalada Wararka Somaliland ee SOLNA .
Warqaddan ayaa lagu sheegay in badhtamihii sannadkii 2017kii Jamhuuriyadda Somaliland u dirtay VOA cabashooyin in ka badan saddex jeer, kuwaasi oo aan waxba laga beddelin habkii ay idaacadaasi wax uga baahinaysay Somaliland.
Siday werisay Wakaaladda SOLNA, waxa Warqadda lagu xusay Barnaamijkii doodda ahaa ee 15 March 2018, ka baxay ka laanta Af Soomaaliga VOA ee ku saabsanaa heshiiskii Dekedda Berbera ee ay wada galeen DP World, Somaliland iyo Ethiopia.
Taas oo ay ka muuqatay in loo xaglinayo dadkii ka soo horjeeday heshiiskaasi ee dhinaca Somalia. Xukuumaddu waxay ku eedeyaysay in doodaas ay idaacadu soo wada qaadatay dadkii heshiiska ka soo horjeeda oo kaliya balse aanay jirin cid taageersan heshiiska oo la sii daayay. Ugu dambayn waxa xukuumaddu sheegtay inay waajib tahay in dib u eegis lagu sameeyo heshiiskii xukuumadda Somaliland iyo VOA-da.
Previous articleMadaxweynaha Turkiga oo ku hanjabay in Ciidammadiisu weeraro dheeri ah ku qaadi doonaan Jabhadda Kurdiyiinta
Next articleWefti ka socda Turkiga oo gaadhay Saylac